निजी मेडिकल कलेजद्धारा शुल्कमा मनोमानी ? – Nepali Health
निजी मेडिकल कलेजद्धारा शुल्कमा मनोमानी ?
२०७४ माघ ८ गते ८:१९ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, ८ माघ । २१ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ भौचरमार्फत चितवन मेडिकल कलेजको खातामा पठाएका उज्ज्वल भट्टराई एमबीबीएसमा भर्ना भइने भो भन्नेमा ढुक्क थिए। तर, अहिले उनी चिन्तामा छन् । पढ्न पाउने/नपाउने के हो भन्दै उनी दुई दिनदेखि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा डिन खोज्दै हिँडेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेको समाचार छ ।
भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केका लागि थप ६ लाख बुझाउनुपर्ने हो भनेर प्रश्न गर्दा यस्तै छ यहाँको चलन भन्ने जवाफ पाए।, त्यसपछि उनी आईओएममा कति रकम दिनुपर्ने बुझ्न डिनलाई खोजिरहेका छन्।
भक्तपुर लोकन्थलीका भट्टराईलाई मात्र होइन, कडा मिहिनेत गरी मेरिटका आधारमा नाम निकाल्न सफल दर्जनौँ विद्यार्थीलाई निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क मागेपछि चिन्तित देखिन्छन्।
‘पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै भएनु, उनले दुखेसो व्यक्त गर्दै भने, ‘सरकारले यति शुल्क तिरे भइहाल्छ भन्ने निजी मेडिकल कलेजले बढी असुल्ने भयो। हामी विद्यार्थीको पिरमर्का सुनिदिने कोही भएन।’
तर, कसैले वास्ता नगरेपछि निन्याउरो अनुहार लगाउँदै घर फर्कने गरेका छन्। डिन कार्यालयका कर्मचारीले हामी केही गर्न सक्दैनौं। सरकारकै कमजोरी हो भन्ने जवाफ दिने गरेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन्। किसानको छोरा भए पनि डाक्टर बन्ने सानैदेखिको सपना पूरा गर्न मिहिनेत गरेको उल्लेख गर्दै साह भन्छन्, ‘सरकारले तोकेकै शुल्क तिर्न पनि घरजग्गा बेच्नुपर्ने स्थिति छ। थप २०÷२५ लाख कहाँबाट जुटाउने ? छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न आफूले दुई वर्षदेखि रातदिन कडा मिहिनेत गरेको उनले बताए।
उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, उपत्यका बाहिरका कलेजले ४२ लाख ५० हजारसम्म शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ। तर, ५० देखि ६० लाखसम्म लिने गरेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन्।
जनघनत्व बढी भएका ठाउँका बालबालिका खोपबाट वञ्चित
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई २० हजार भत्ता दिने तयारी